Kaararka Aqoonsiga Gawaarida PDF Download
Katalogeliyaha Geared Motors
Soo hel buugga-yar ee matoorka qalabka hete-ka ah ee shaxda ka hooseeya nooca shafka
Xisaabinta matoorrada gawaarida iyo gearbox pdf
Tani waa hage loogu talagalay gearbox iyo xulashada mootada kuwa aan si buuxda u aqoon doorashooyinka. sanaadiiqda waaweyn iyo matoorrada waa bir la shubay, aluminium kuwa kale oo dhan.
Loogu talagalay qaabeynta korantada iyo farsamada ee Single & labo jibaar
Si sax ah u xulashada qalabka dib-u-dhiciyaha ama mashiinka jaangooyada, Qiimeynta miisaanka sarreeya, saamiga qalabka ee horumarka dhow, xulashooyin badan oo dhejis ah, wadajir.
Baabuurrada caadiga ah ee loo yaqaan IEC-ga loo yaqaan 'brake, VFD iwm.
Macaamiilku wuxuu dooran karaa dhammaan noocyada mashiinnada weelasha ku habboon gaari kasta. Weeraro kala duwan oo iskudhaf ah oo ka socda mootada iyo boorsada.
Soo hel buugga-tusaha taxanaha mashiinka dixiriga ee xijaabka leh
S taxane unugyada geedka dixiriga -
Xagal toosan oo taxane ah, matoor qalabka dixiga ayaa si fudud loogu rakibi karaa codsiyada ugu adag. Awoodda mootada laga bilaabo 0.04 HP illaa 157.37 HP. oo ay ku jiraan iskudhafyo dixirigo / joornaansho diineed / heical, sidaa darteed iyagu way ka hufan yihiin unugyada qalabka dixiga-dixiga ah ee caadiga ah.
Unugyada Gear marka lagu daro matoorrada loo baahan yahay
Awoodda unugyada qalabka dixiriga-dixiga - waa. Si aad ah ayaa uga hufan ugandha qaybaha unugyada dixiriga cad sababta oo ah isku darka dixiriga-dixiga. Gudbinta awooda toosan waxay ka dhigeysaa unugyada qalabka dilaaga-dixiriga ah gaar ahaan kuwa xasilloon laakiin istcimaal badan.
Halkan Hoose Faahfaahinta Golaha iyo Howlgallada
Fududaynta xulashada badeecada, Waxaa jira tilmaan laga soo qaatay Sogears iyo sidoo kale faahfaahinta ku saabsan khaanadda magaca. Tilmaanta xulashada gawaarida toosan iyo buugga dayactirka galka. galka qalabka 'gearbox' pdf.
Soo hel buugga-yar ee matoorrada carradu xambaarsan tahay ee hevel bevel
Motoroolka muraayadaha jilicsan ee Helical bevel waxay leeyihiin culeys aad u sareeya
Kani waa nooc ka mid ah xaglaha saxda ah ee gawaarida gawaarida gawaarida lagu xiro taas oo ah cabbir isku mid ah si loo tolo matoorka gawaarida gawaarida gawaarida ah ee ku jira buugiisa, laga bilaabo nooca gawaarida gawaarida gawaarida.
Matoorrada qalabka loo yaqaan 'bevel gear gear' waxay xaqiijinayaan waxtarka ugu sarreeya gaar ahaan
Qalabka istiraatiijiga ah iyo qaabdhismeedka qalabka korontada lagu qurxiyo ee qalabka wax lagu xiro ayaa lagu kala saaraa iyada oo lagu farsameeyo dhinacyada oo dhan. Helical, usheeda dhexe barbar, bevel, dixiriga buugaagta iyo matoorrada geerka dirxi.
Unugyada qalabka Helical-bevel waxay bixiyaan heer sare oo hufnaan ah oo ka badan 90%
Guryaha isku-dhafan iyo kuwa la hagaajiyay ee qalabka wax lagu xiro ayaa kala soocaya iyaga oo lagu farsameeyo dhinacyada oo dhan. Qalab Iskudhaf leh oo loo yaqaan 'Servomot Servomors' oo leh Unugyo Helical-Bevel Gear ah.
Soo hel buugga-hayaha matoorka ee isku-midka ah
Si sahlan u hel qalabkaaga is-barbar socda
Gawaarida jiqda Nidaamyada wadista baabuurta ayaa ku habboon in loo isticmaalo intralogistics iyo sidoo kale alaab-qaadayaasha alaabada badan iyo warshadaha cuntada. Waxay bixisaa xulasho balaadhan oo ah Isbarbardhigga Shaft Geared Motors.
Xarriiq isbarbar socota oo lagu rakibay matoorro cilad leh oo ay soo saarto Awood dhisid
Mashiinnada mashiinka isbarbar socda ayaa laga heli karaa keydka labadaba naqshadaha AC iyo DC. Shaam rakibay iyo flange rakibay siman gearmotors. Shirkaddu waxay bixisaa xulasho ballaaran oo ah Motors Parallel Shaft Geared Motors.
Jaangoynta barta xagal qumman iyo xagal qumman ayaa hoos u dhigaysa buuggyaraha
Qaybta warshadaha gaarka ah. Nooca. Soosaarayaasha, Is barbardhig qalabka wax lagu jaro iyo mashiinnada mootada. Cabirka matoorrada mashiinka marsho ee isku midka ah ee Helical waa isku mid sida SEW. Pmashiinada arallel usheeda dhexe waxaa laga heli karaa keydka labada naqshadood ee AC iyo DC.
Soo hel buugga-yar ee qalabka yareeyaha cycloidal
Wadada Wadista ee Diyaarinta qalabka maareynka duubayaasha
Wadada Wareegtada Naqshadeynta maaddada loo yaqaan 'cycloid gear' gaar ah waxay leedahay faa'iidooyin ka sarreeya kuwa xawaaraha yareeya iyadoo la adeegsanayo qalabka ilkaha ee aan caadiga ahayn. Drive waxay awood u leeyihiin inay iska caabbiyaan culeyska shoogga ee goosgooska ah illaa 500% ee qiimeynteeda wareegga buugyaraha.
Mid ka mid ah soo-saareyaasha qalabka wax-ku-barasho ee sida aadka u yaqaan
Taxanaha WB Micro Cycloidal Pinwheel Reducer Gear Motor Gear: waxay leedahay hal marxalad oo cyclo ah oo wax soosaarida qalabka, labalaab marxalad cycloidal reducer ah. Buugga Shiinaha ee loo yaqaan 'Cycloidal Gear Reducer'
Yaraanaya xawaaraha Cycloidal waxay bixisaa saxda ugu sarreysa ee la heli karo
Ku takhasusay qiimaha miisaaniyadda gudbinta awoodda oo leh qalab tayo sare leh. Naqshadaynta qalabka 'cycloidal disc disc' wuxuu u oggolaanayaa qaybaha yareynta inay ku shaqeeyaan si siman. Xullo ballaaran oo gearboxesyada robotka ah ee eber-gadaal u dhaca, sanduuqyada qalabka adeegga ee saxda ah.
Soo hel buugga-yar ee qalabka wax lagu dilo ee NMRV
Yaraanta qalabka dixirida iyo mashiinnada dixirigoodu woxoogaa
Isku-darka Gooryaanka Isku-darka ah NMRV iyo NMRVpower dixiriga dixiriga dixiriga ayaa hadda matalaya xalka ugu horumarsan ee shuruudaha suuqa marka loo eego waxtarka iyo dabacsanaanta.
NMRV iyo NMRVpower dhimista qalabka dixiriga ah
Taxanaha cusub ee 'NMRVpower', oo waliba loo heli karo isugeyn ikhtiyaar ikhtiyaar ah / isku dir ah, ayaa loogu talagalay inuu damaanad qaado qaab-dhismeed sare. Dhimista gooryaanka dixiriga ah, oo isku dhafan iyo cutub dhimista heerka-hore ah.
Motovario NMRV iyo NMRV POWER gawraca dabaysha
Qaybaha maaddada dirxiga taxanaha ah ee 'TNRV' waa jiil cusub oo wax soo saar ah oo ay soo saartay shirkadeena iyada oo ku saleysan kaamilista alaabada taxanaha ah ee WJ. Waxqabadka ku qoran buug-gacmeedka wuxuu u dhigmaa booska kor u qaadista B3 ama wax la mid ah.